Maitiro ekupinza WhatsApp machata kuTeregiramu nharembozha yako yeApple Android ➡️ Android Pop ▷ ➡️
Maitiro ekupinza WhatsApp machata kuTeregiramu nharembozha yako yeApple
Maitiro ekupinza WhatsApp machata kuTeregiramu nharembozha yako yeAppleSezvo WhatsApp yakazivisa shanduko yemutemo pakugovana dhata neFacebook, kwave nekudzokororwa kutaura pamambure pamusoro pekuti shanduko iyi ingava nengozi sei kunyangwe kambani yakaedza kusimbisa vashandisi vayo uye yakatombomisa kutanga kushanda kweNew Policy mutemo. .
Maitiro ekuchinjisa WhatsApp chats kuTeregiramu
Muchirevo ichi, teregiramu yakanyatsoona huwandu hwevashandisi vanouya skirocket pane iyo pakarepo kutumira kutumira, zviri pachena inokwezva kune akawanda mabasa ekuwedzera asati aitwa mu WhatsApp, uye kushamisa kwayo kwakazara kugovana dhata nemakambani ekunze.
Maitiro ekupinza WhatsApp machata kuTeregiramu
Kana iwe uchiwanzoshandisa WhatsApp neshamwari uye kubuda asi iwe uchifunga kuisa kunyorera padivi uchifarira Teregiramu, iwe unofanirwa kuziva kuti iko kunokubvumidza kuendesa WhatsApp machats muTeregiramu uye ramba uchitaura sekunge hapana chachinja. Muchirongwa ichi chipfupi tinokuratidza izvo izvo matanho ekutevera kupinza WhatsApp machata muTeregiramu:
Dhawunorodha yazvino vhezheni yeWhatsApp neTeregiramu kubva kuGoogle Store;
Fambisa iyo yega yega chat kana yeboka chat yaunoda kuendesa;
Bata zita rehurukuro kumusoro uye sarudza chinhu »Export chat» pazasi;
Sarudza kana iwe uchida kuendesa ma multimedia mafaera (mavhidhiyo, mapikicha, izwi) akagovaniswa mune chat
Sarudza Teregiramu mune yekugovana menyu> sarudza iripo Teregiramu chat / boka kana gadzira imwe nyowani;
Mirira kuti oparesheni ipedze (PS: mashandiro anogona kutora nguva kana paine yakawanda midhiya mafaera mune chat).
Kana iwe wakatevera nenzira kwayo aya matanho akareruka ku maitiro ekupinza WhatsApp machata kuTeregiramu nharembozha yako yeApple, panguva ino iwe unofanirwa kunge uri panguva imwechete mukutaurirana kwawakaita paWhatsApp.
Android, teregiramu, WhatsApp
Maitiro ekugonesa Google Chrome pop-ups mu Android 10